Syria: Ny Fifaninanan’ny Teknolojia · Global Voices teny Malagasy
Syria: Ny Fifaninanan'ny Teknolojia
Voadika ny 02 Avrily 2018 7:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, عربي, বাংলা, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 11 Febroary 2010 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Inoana ianao fa efa nandre ny momba ny feon'anjomara nanambara ady teo amin'i Google sy Apple raha olona liana na dia kely monja amin'ny Teknolojia aza ianao. Nandritra ny herintaona izay, nitombo tao anatin'ny fiarahana sy ny fifandrafiana ireo orinasa ka niafara tamin'ny famoahan'ny Google ny Nexus One, ilay smart-finday izay nambara ho ilay tokana hany fandrahonana ho an'ny iPhone Apple. Nanatevin-daharana tamin'ny adin'ny bilaogera ny tontolon'ny bilaogy Syriana.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay no nanombohan'ny Ardroid izay voalaza ho “tranonkala teny Arabo voalohany” natokana ho amin'ny tamberina, toro-hevitra, ary ny fanatsarana ny OS Android vaovao an'i Google. Ity tranonkala ity no niditra voalohany tamin'ny adin'ny teny niaraka tamin'ny tamberina nataony momba ny finday Android, sy ny fampitahany ny iPhone ary ny vao haingana teo ny iPad. Naneho hevitra momba ny fanamarihana farany nataon'i Steve Jobs, filoha tale jeneraly sady atidohan'i Apple, momba ny Google izy ireo:
يبدو أن الانتشار والنجاح الهائل للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد (والحواسب اللوحية قريباً) هو من الأمور التي تُقلق ستيف جوبز Steve Jobs مؤسس شركة آبل, ففي تصريح لا يخلو من نبرة توتر عندما كان جوبز يتحدث أمس في اجتماع لموظفي آبل قال (متحدثاً عن غوغل): “نحنُ لم ندخل سوق البحث, لكنهم دخلوا سوق الهواتف. بدون أي شك يريدون القضاء على آيفون. لكننا لن نسمح لهم”.
Toa nahavariana ny fahombiazana sy ny fiparitahan'ny finday Android OS (miaraka amin'ny ‘tablettes‘ ihany koa taorian'izay) ary anisan'ny nampiahiahy an'i Steve Jobs, ilay mpanorina an'i Apple. Tao anatin'ny fanambaràna mafana izay nataony niaraka tamin'ny ekipany dia nilaza izy (momba an'i Google) fa: “Tsy niditra tamin'ny sehatry ny fikarohana tamin'ny aterineto izahay, niditra tamin'ny fiharian'ny finday ry zareo. Tandremo sao voafitaka ianareo, te hamono ny iPhone izy ireo. Tsy ho avelanay hanao an'izany ry zareo “
Tonga avy hatrany ny valinteny avy amin'ny vondrom-piarahamonina Apple, tamin'ny famoahana ny iPhad – tranonkalan'ny teknolojia mifantoka amin'ny iPhone sy ny iPad nivoaka farany. Ary aoka tsy ho voafitaky ny fitoviana mahagaga ianareo, midika raharaham-barotra ihany koa izany, ary toy ny tao amin'ny fanambaran'izy ireo laharana voalohany 1 ihany koa, fa niroso tamin'ny fanafihana izy ireo :
1- Atao araka ny fomba matihanina manaraka drafitra ny asanay : tsy misy toerana ho an'ny kisendrasendra, ho an'ny korontana na ny fiankinana izay manimba ny tetikasa maro hafa.
2- Hitondra ny traikefa mivantana avy amin'ny vokatra sy ny rindrambaiko izahay ary hiorina amin'ny traikefa ny fanombanana ataonay.
3- Hisy ny fampiharana ny fomba fiasantsika etsy andanin'izany ihany koa, miaraka amin'ny famolavolantsika sy ny vokatrintsika manokana izay natokana ho an'ny tsenan'ny iPhone sy ny iPad, ary miaraka amin'ireo ny labôratoarantsika manokana ho an’ iPhad .
4- Hiala lavitra amin'ny tsy-fahazakana izahay ary tsy hanao fanalam-baraka amin'ny fampitahana vokatra avoakan'ny mpifaninana hafa, tahaka ny ataon'ireo tranonkala maro hafa.
Toy izany no nanombohan'ny ady tao anatin'ny fo sy ny saina ary ny findain'irep mpakafy ny teknolojia Syriana sy Arabo.